तेह्रथुम पावरले पहिलो कारोबारका लागि कति पाउला मूल्य रेञ्ज? - Nagarik Today
होम » तेह्रथुम पावरले पहिलो कारोबारका लागि कति पाउला मूल्य रेञ्ज?
तेह्रथुम पावरले पहिलो कारोबारका लागि कति पाउला मूल्य रेञ्ज?
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले पहिलो शेयर कारोबारका लागि रू. ८४ दशमलव ७४ देखि रू. २५४ दशमलव २२ को मूल्य रेञ्ज पाउनेछ । कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा नेप्सेले तीन गुणासम्मको मूल्य रेञ्ज तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा उक्त मूल्यमा पहिलो कारोबारका लागि मूल्य रेञ्ज पाउने देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८४ दशमलव ७४ रहेको छ । यस कम्पनीले कम्पनीले भदौ ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरी भदौ २५ गते बाँडफाँट गरेको थियो ।
nepal stock exchangenepseshareshare bazarshare marketshare market nepalterhathum power company limited